Tajaajila | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa naannichaa isa dhumaa fi ol’aanaa dha. Akkaataa Labsii Gurmaa’insa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Naannichaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Labsii Lakk. 216/2011 keewwata ….tiin, Manni Murtichaa ergamni wal fakkaatummaa fi tilmaamummaa hiikoo seeraa Manneen Murtii Naannichaa keessatti akka dhufu taasisuu/hojjachuu itti kennamee jira.
Akkaatuma kanaan murtii Manneen Murtii ol’aanaan kennan irratti ol’iyyata dhiyaatu dhaddachaalee idileen ilaalee murtii ni kenna. Kana malees murtii dhumaa dhaddachaaleen idilee isaa kennan irratti dogoggorri seeraa inni bu’uuraa raawwatameera jechuun iyyannaa dhiyaatus sirna ijibbaataan ilaalee murtii kennuuf aangeffameera. Murtiin dhumaa dhimma naannoo irratti dhaddacha Ijibbaataa pirezidaantii fi pirezidaantii itti aanaa Mana Murtichaa dabalatee Abbootiin Seeraa 7 moggaafamuun kennan Manneen Murtii naannichaa sadarkaa hunda irra jiran irratti dirqisiisummaa kan qabuu dha.
Walumaagalatti, Manni Murtichaa bu’uurarraa tajaajila abbaa seerummaa ol’iyyata Manneen Murtii jalaa irraa dhufan fuudhee ilaaluu irratti fuulleffate ni kenna. Dabalataan dhimmoota Federaalaas aangoo bakka bu’iinsaan ni ilaala.
Hojii ijoon Mana Murtichaa tajaajila abbaa seerummaa kennuu yoo ta’u, kanumaan wal qabatee tajaajilootni armaan gadii ni kennamu.
Tajaajila Deggersaa fi Hubannoo Seeraa
Manni Murtichaa deggersa armaan gadii ni kenna;
Dhimmoota yakkaa irratti namoota harka qalleeyyii ta’anii fi abukaattoo dhuunfaan dhaabbachuu hin dandeenyeef tajaajila deggersa seeraa;
Dhimmoota yakkaa irratti namoota afaan hojii naannichaa hin beekneef tajaajila hiikkaa afaanii;
Kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa fi seera irratti hubannoo hawaasaa gabbisuuf tajaajilli hubannoo seeraa kallattii adda addaatiin ni kennama.
Hojiileen gama kanaan hojjataman qindeessummaa Waajjira Deggersaa fi Hubannoo Seeraa Mana Murtichaatiin kan raawwatamanii dha.
Tajaajilotni hojiiwwan dhaddachaan wal qabatan kanneen armaan gadii Mana Murtichaan ni kennamu.
Iyyata abbaan dhimmaa dhiyeeffatu irratti hundaa’uun galmee banuu;
Ajaja dhaddacha irraa kennamu barreessuun baasii gochuu;
Garagalcha murtii ykn ajaja kennuu;
Abbaa dhimmaa murtii Manni Murtichaa kennu komatee ol’iyyata gaafatuuf ol’iyyata kennuu;
Tajaajila abbaa seerummaa tekinooloojiidhaan deggerame kan akka I’faayiliingii, viidiyoo konfiraansii, tuqii argi, daataa beezii, iskaanessuu fi kkf.